घाँटीमा तीन खालका क्यान्सर, कसरी... :: डा. कुञ्जन आचार्य :: Setopati
डा. कुञ्जन आचार्य नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ
अझै सजिलो तरिकाले बुझ्नका लागि मुखबाट सुरू भएर खाना खाने नली हुँदै तल पेटसम्म जोडिएको इसुफेगसको माथिल्लो भागसम्म हुने रोग घाँटीको क्यान्सरमा पर्छ।
त्यस्तै आवाज आउने ठाउँमा जसलाई भ्वाइस बक्स भनिन्छ,त्यहाँ पनि क्यान्सर हुन्छ। थुक ग्रन्थीहरूको दायाँ/बायाँ हुने ट्युमरलाई समेत घाँटीको क्यान्सर भनेर बुझ्न सकिन्छ।
खाना खाने नलीको क्यान्सर मुखबाट तल इसुफेकसदेखि माथिल्लो भागसम्मको हुने क्यान्सर र स्वास आउने ठाउँको क्यान्सरको पहिलो कारण चुरोटको सेवन नै हो। सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनले घाँटीको क्यान्सर हुन्छ। रक्सी र चुरोट खानेलाई यो दुई ठाउँको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
नखानेलाई हुँदै हुँदैन भन्ने होइन,तर खाने मान्छेहरूलाई हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
थाइरोइड क्यान्सरको मुख्य कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। सम्भावित कारण भने छन्। एटम बम र रसायनिक लिकको कारणले र त्यहाँबाट निक्लिएको तत्वले जापान र कोरियामा थाइरोइड क्यान्सर धेरै देखिएको छ।
रेडियो याक्टीभीटीले गर्दा यस्तो भएको हो। जथाभावी रेडियसन एक्सपोजर भएर पनि थाइरोइड क्यान्सर हुन्छ भनिएको छ। ठूलो सिटी स्क्यान गर्दा पनि रेडियसन एक्सपोजर भएर हुने संभावना देखिएको छ। थाइरोइड क्यान्सर वंशाणुगत पनि हुन्छ।
नेपालमा वंशाणुगत कारणले हुने थाइरोइड क्यान्सर बढी देखिएको छ। के कुराले हुन्छ भन्ने थाहा पाएर त्यसलाई रोक्न सकियो भने घाँटीको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। प्रमुख कारण भनेको सुर्तिजन्य पदार्थ र रक्सी नै हो। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। चुरोट, सुर्तीको बट्टामा समेत यही कुरा लेखेको हुन्छ। क्यान्सरको लक्षण पहिचान गरेर क्यान्सर हुनुभन्दा पहिला नै थाइरोइड निकालेर क्यान्सरबाट जोगिन सकिने प्रविधि पनि सुरू हुन थालेको छ।
तर मुख्य कुरा सुर्ती र सुर्तिजन्य पदार्थबाट टाढा रहनु नै क्यान्सरबाट जोगिने प्रमुख उपाय हो।
घाँटीको क्यान्सर भन्नाले कुन ठाउँको क्यान्सर हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। स्वास फेर्ने नलीको क्यान्सर हो कि,आवाज आउने ठाउँको क्यान्सर हो कि,खाना खाने नलीको,जिब्रोको मुखको क्यान्सर हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। क्यान्सर कुन चरणमा छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। क्यान्सरको पहिलो ,दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरण भन्ने हुन्छ। जति अगाडि पत्ता लगाउन सक्यो त्यति राम्रो नतिजा आउँछ।
उपचारका लागि यसको तीन वटा तरिका अपरेशन,रेडियो थेरापी र किमो थेरापी हुन्छन्। यो सबै चिकित्सकको सल्लाहले मात्रै हुने हो। स्वर बसेको क्यान्सर सुरूआती अवस्थामा छ भने त्यसको रेडियो थेरापी गरिन्छ। मुखको सुरूआती चरणको क्यान्सर छ भने त्यसलाई अपरेशन गरिन्छ। त्यसैले कुन ठाउँमा क्यान्सर छ कुन चरणमा छ भन्ने पत्ता लगाएपछि मात्रै उपचारको तरिका अपनाउनुपर्छ।
मुखको,गिजाको,जिब्रोको क्यान्सर भएमा सुरूआती चरणमै अपरेशन गर्ने हो भने असी प्रतिशत पूर्ण रूपमा ठीक हुन्छ। तर त्यही क्यान्सर तेस्रो चौथो चरणमा पुग्यो भने उपचारको पद्धति फरक हुन्छ।
सर्जरी, रेडियो थेरापी र आवश्यकता अनुसार किमो थेरापी पनि जरुरी पर्छ। उपचार कुन पद्धतिबाट गर्ने भन्ने कुरा कुन ठाउँमा छ र कुन स्टेजमा छ भन्नेले निर्धारण गर्छ। कुन ठाउँमा क्यान्सरले असर गर्या छ भन्ने कुराले उपचार पद्धतिको निर्धारण गर्छ।
क्यान्सरको प्रकृति अनुसारको लक्षणहरू देखिन्छन्। ल्यारेङसको क्यान्सर भएको छ भने स्वर भासिँदै जान्छ। त्यसपछि स्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। खाना खाने नलीमा क्यान्सर भएको छ भने घाँटी खस खस हुन्छ। थुकमा रगत आएजस्तो अलि गाह्रो भएपछि निल्न गाह्रो भएजस्तो लक्षणहरू देखिन्छ।
थाइरोइड क्यान्सर सुरूआती चरणमा अल्ट्रासाउण्ड गर्दा थाहा हुन्छ भने ठूलो भइसकेपछि औंलाले छामेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसलाई राम्रोसँग उपचार गर्यो भने ९० प्रतिशत उपचार सफल हुन्छ।
घाँटीको क्यान्सर दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। किनकी चुरोट खाने र सुपारी खानेले वर्षौंदेखि खाएको हुन्छ। यदि उसलाई जिब्रोमा क्यान्सर भयो भने त्यहाँको क्यान्सर निकालिन्छ। तर उसले चुरोट रक्सी र सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन पहिलेदेखि सेवन गरेको छ भने उसलाई चुरोटले गाला,फोक्सो र खाना खाने नलीमा पनि असर गरेको हुनसक्छ। त्यसैले एउटा ठाउँको क्यान्सर फाले पनि फेरि अर्को ठाउँमा क्यान्सर हुने खतरा रहिरहन्छ।
(डा. आचार्य शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १८, २०७६, २३:००:००